Faaleyn And Falanqeyn Ku Saabsan Waxqabadkii Xukuumada Somalilaan Oosanadkii Kowaad U Dhamaaday . Qalinkii A/Rahman Fidhinle UK. – somalilandtoday.com
Faaleyn And Falanqeyn Ku Saabsan Waxqabadkii Xukuumada Somalilaan Oosanadkii Kowaad U Dhamaaday . Qalinkii A/Rahman Fidhinle UK.
Waxqabadkii xukuumada sanadku udhamaaday ee laga baahiyey warbaahinta ayaa ahaa Geed Sare waab ku koobnaa dhinacyada Hurumarinta beeraha, la dagaalanka musuq maasuqa , wax soo saarka kheyraadka dalka, koboca Kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeega bulshada ku waas oo qirey in waxqabad muhiima la gaadhay mudadaa kooban ee sanadka ah. Hadaba waxaa xaqiiqo ah in Xukuumadu MBA ay raacday dhabadii lagu yaqaanay Kulmiyihii hore waxaana ay wada burisay dhamaan balan qaadayadii buugeeda cagaaran ku qornaa. Waxaa weli ummadda u sii muuqda qaloocii iyo qarsoodigii dalka lagu boobay. waxaa sii muuqda hadhkii iyo humaagii galay dawladnimada Somaalilaan.Waxaa muuqda cadaalad daradii, sadbursigii iyo ceebihii dhacay kuwaas loo hayo markhaatiyaal iyo maragyo.
1- Siyaasadda Arimaha debeda ee Somaliland waxay noqotay mid heehaabaysa oo aan laheyn istiraajiyad cad oo ay raacdo.
Xukuumadu dalka ugamay faa’ideyn bogcada wacan ee Somalilaan aduunka ay kaga taalo iyo istiraajiyada ay leedahay Marsada Berbera oo dhacda marinka Aduunka ugu muhiimsan ee ganacsiga aduunka badankiisu uu maro, marinkaas oo uu maro shidaalka aduunka ugu badani ayaa loolan Siyaasadeed dawladaha waaweyni isku hirdiyayeen waayadan danbe. Siyaasadda Arimaha Debeda ee Somaliland waxay ku hafatay isbedeka cusub ee ka curtay dalka itoobiya.Taasna waxaa cadeyn u ah Dawlada imaaraatiga iyo itoobiya oo yeeshay sheerka ugu badan ee Dekeda Berbera 70%, iyaga oo marinka cadmeed iyo Dekeda Berbera ka leh dano cad cad oo ujeedooyin fog fog leh, halka Somalilaan ay aragtideedii iyo odoroskeediiba ku soo ururisay balan qaad mashaariic been noqday iyo xaqul qalin yar oo faro guudkood ah. Maanta Dekedii Berberi magac ahaan mooye manfac Somalilaan kuma qabto waxaana ay noqotay Aabaha sicir bararka inoo keena maadaama lacagta ka soo xaroota toos dalka looga saaro. waxaana xukuumadu ku fashilantaya in ay ummadda u sheegto waqtiga la bilaabi doono dhismaha dekeda cusub ee 2 sanadood la sugaayey.
2-Waxaa Xukuumadu ku fashilantay in ay Doorashada waqtigeeda ku qabato oo shacabka Somalilaan awoodoodii ay wax ku dooran lahaayeen loo soo celiyo.
Waxaa fadeexad qaawan ah in maanta sadexda Gole ee Somalilaan ay mudo kordhin kuraasta ku fadhiyaan. masuuliyadaana waxaa leh xukuumada talada haysa.
3- Waxay xukuumadu ku fashilantay siyaasadii waxabarashada ee dalka oo dhan ka soo bilow ta hoose ilaa ta sare oo aad u tayo beeshay, taa soo hada shahaadadaha Jamacadaha Somalilaan ay iska noqdeen waraaqo kalareysan oo aan aduunka laga ictiraafsaneyn. Xukuumadu ma sameyn axdi cad oo ku qotoma tayenta waxbarashada dalka oo dhan.
4- Waxaa Xukmuumadu ka gaabisay in waxsoo saarka Kaluunka kor u soo qaado maadaama Somalilaan leedahay xeeb dhererkeedu yahay 850 km oo u dhiganta 75km2.
Waxay Xukuumadu ka gaabisay in ay Sameyso siyaasad cad oo lagu soo saaro kheyraadka dabiiciga ah ee dalka dhex jiifa.
5- Maxay Xukuumadu ka gaabisay Sicir bararkii iyo qiimo dhacii shilinka Somaalilaan oo meel xun sii maraaya.
Waxay aheyd in xukuumadu cabirto xawaaraha uu ku socdo sicir bararku kadina hakiso. Waxay aheyd in ay u sameyso Hayad u gaar ah sicir bararka inta Central Banku awoodiisa oo buuxda uu la soo noqonaayo. Waxay aheyd in xukuumadu dhinto cashuurta Raashinka iyo dhamaan cuntada la quuto halka ay kor u sii kicisay maadaama ilaa iyo hada lacagta doolarka ah ee dalka ka baxaysaa ay ka badan tahay lacagata doolarka ee dalka soo gelaysa sicir bararku waa ” ina daanweyne “xukuumaduna waa gudiyo badan aan waxba soo kordhineyn”.
6- Hirgelinta hanaanka Shaqo abuurka dhalinyarada.
Dawladnimdu waa shaqo abuur- hadii qofka madaxda ahi uu waxba soo kordhin waayo oo shaqo abuuri waayo wuxuu la mid noqonayaa uun gafane isagu is naaxiya. Xukuumadu waxay abuurto iska daayoo – 3 -dii bilood ee ugu horeysay waxay shaqooyinkii ka caydhisay 230 shaqaale ah ku waas oo ka howlgeli jiray madaarka Hargeisa iyo Madaxtooyada. Alleylehe waxay buuxisay boosaskii banaanaaday markii la tiro koobay shaqaalaha JSL oo dhan oo noqday 14 kun oo shaqaale rasmi ah iyo 2476 shaqaale cagleyaal iyo kuwo dhintay isugu jira oo musharkooda loo qaadi jiray oo payrolka hore ugu jiray. shaqaalahan ayey xukuumadu gobolada dalka konton konton ugu qaybisay oo ay leedahay shaqaale cusub ayaanu qornay. Mashruuca shaqo qaran ee ay gobolada ka bilowday ayey isna ku bilaabaysaa 1500 arday oo keliya oo u dhiganta ardeyda ka qalin jibisa hal jaamacad badhkood halka ay dalka ka jiraan 32 Jaamacadood oo ay sanad kasta ka soo qalin jebiyaan in kabadan 10 kun oo arday. Waxaa ummaddu wada ogtahay in weli naasihii irmaanaa ee qarankani lahaa ee ardeyda loo lisi lahaa ay weli sife bilaa sharci ah umaalaan jileyaashii qarsoonaa ee ku faai’day hantiddii qaranku wada lahaa.
7- La dagaalanka musuq maasuqa iyo maal urursiga .
Waxaa shacabku is weydiinayaa weli horta musuq maasuqa xagee lagula dagaalamaa ? Yaase la dagaalama? Welise dawlada MBA cid mow soo xidhay ? si xukuumada loo aamino, waxay aheyd in ay ummadda u soo bandhigto shaqsiyaadkii leexsaday ee ku tagri falay $100 Million doolar ee lagu lunsaday mashruucii biyo balaadhinta ee Xubno weyne ee lagu hungoobay. Ilaa hada Xukuumada cusubi lamay iman Siyaasad Maaliyadeed oo lagu xakameeyo Musuq-maasuqa xadhkaha goostay taas oo la rabay in ay fulinteedu ka timaado dowlada dhexe ilaa dawladaha hoose. Shacabka reer Somalilaan waxay isha ku hayaan marka laga reebo lacagaha ay bixiyeen DPW iyo dawlada imaaraatigu bal sida ay u maareyso Xukuumadu lacagahan mudadii sanadka aheyd soo gaadhay sida: $25 Million dollar ingiriisku bixiyey, $ 10 million dollar dawlada Canada bixisay, $14 Million dollar Baanka Aduunku bixiyey, $ 22 Million Dawladu Germay biyo gelinta ku bixisay, $10 million dollar ee GIZ-( Germany ) ay bixisay iyo $3 Million dollar ee duufaanadii dalka ka dhacay lagu caawiyey iyo lacagha fadhiisinka ah ee weli ku jira Sanduuqa Horumarinta Somalilaan.
8 – Dib u soo celinta dhamaan Kaabeyaashii Dhaqaalaha ee dalka si looga rumeeyo korodhka iyo kobcinta dhaqaalaha wadanka.
Weli “Faanoole fari kama qodna ” Kaabeyaashii yaraa ee ay xukuumadu dhawaan soo celisay waxaa loo qaatay” qowda maqashii waxana how qaban” maadama ay ku dhiiran wayday xukuumadu in ay soo celiso dhamaan kaabeyaashii dhaqaalaha, waxaana ay ka gaabisay xukuumadu inay dib uhabeyn buuxda ku sameyso ama gacanta dawlada ku soo wada celiso dhamaan ilihii dhaqaalaha iyo kaabeyaashii dhaqaalaha ee qaranka laga boobay. dhamaan ilihii dhaqaalaha ee dalka wax ka tari lahaa xaga korodhka dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhalinyarada ayaan ilaa hada la garaneyn habkii loo bixiyey iyo xeerarkii lagu bixiyey,cashuur dawlada inta uga soo xaroota iyo inta u hadhay mudooyinka shirkadahaa kootada loogu xidhay qandaraasyadoodaa aan sharciga lagu jideyn.
7- Taabo gelinta Maamul- wanaaga iyo maareynta hawlaha qaranka. “Good Governance” Weli salka looma dhigin siyaasad cad oo laga sal gaadhaayo.
Tisqaadkii maamul wanaaga iyo maareynta qaranka oo weli hagaas ah, maadaama aanu jirin hab ama nidaam dhameystiran oo ka kooban unugyo habaysan oo maareeya, cabira,odorosa, aloosa, xukuma,ilaaliya, oo xadeeya hawl-maalmeedka qaranka, habkaas oo dhex u noqon lahaa dhamaan hayadaha kala duwan wada shaqeyntooda oo ku saleysan isla xisaabtan, daahfurnaan,isxisaabin iyo xalibnaan joogto ah. Hadii aan la sameyn habkan casriga ah ee wada shaqeyneed iyo nidaam maamul oo maaliyadeed oo hufan waxaa adkaanaysa in ay wada shaqeeyaan oo isla jaan qaadaan Qorshe Howleedyadii Higsiga Qaranka National Development Plan 2- ( 2017-2021 ) iyo Mashaariicda Dawladaha Hoose ee maamul daadeginta GPLG ( Joint programme ) oo iyaguna marin habaabay oo hagaasay.
Waxaan ku soo garoocayaa qormadan : Gobanimo dadka mudan Galadana Allaa iska leh, Shacabow tiraa ka gedmane wax isu geygeyso !!